Ciyaartoyda Manchester United oo sugi la’ kulanka Axada ee Tottenham waayo…!!! – Gool FM
Ciyaartoyda Manchester United oo sugi la’ kulanka Axada ee Tottenham waayo…!!!
(Manchester) 10 Jan 2019. Ciyaartoyda Machester United ayaa sugi la’ kulanka axada ay Wembley kula yeelan doonaan Tottenham tartanka Premier League si ay Spurs u tusiyaan sida ay kooxdoodu isku badeshay markii la ceyriyay Jose Mourinho.
Kulanka Tottenham waa tijaabada ugu adag uu ilaa iminka mari doono macalinka ku meel gaarka Ole Gunnar Solskjaer, kaa oo soo wada adkaaday shantii kulan uu kooxda hogaamiyay.
Red Devils ayaa dib ugu soo laabatay ugaarsiga afarta sare kaddib afar kulan oo xiriir ah ay adkaatay Premier League iyadoona lix dhibcood oo qura u jirta Chelsea oo afaraad fadhisa.
Caawiyaha tababare Solskjaer Mike Phelan ayaa sheegay in ciyaartoyda United ay sugi’ la yihiin kulanka Spurs si ay naftooda ugu caddeeyaan kulamada waa wayn oo ceyn kan oo kale ah.
” Hagaag waa tartan wayn, laakiin kulan kasta ee Manchester United waa tartan wayn maxaa yeelay waxay la micno tahay inaad nafsadaada ku muujiso siyaabo kala duwan, Ciyaartoyda dhabtii waa sugi la’yihiin.” Phelan ayaa sidaa yiri
“Way fahansan yihiin inay tani tahay marxalada ay doonayaan, waxay doonayaan inay ciyaaraan kulamadan waa wayn waxayna doonayaan inay adkaadaan kulamadan waa wayn.
“Waxay doonayaan inay markale noqdaan ciyaartoyda ugu fiican garoonka kubbada cagta waxaana dooneynaa inaan midaa ku dhiiro galino.”.